Tag: waqtiga jawaab celinta warbaahinta bulshada | Martech Zone
Tag: waqtiga jawaab celinta warbaahinta bulshada
Waxaan horey uqiyaastay saameynta ganacsi ee adeegga macaamiisha oo liita xaga warbaahinta bulshada. Ka waran si fudud oo looga jawaabo? Ma ogtahay in 7 ka mid ah 8 farriimood ee bulsheed ee loogu talagalay noocyada aan laga jawaabin 72 saacadood gudahood? Isku soo wada duuboo iyadoo ay jirto xaqiiqda ah in 21% ay kordheen farriimaha loo dirayo noocyada adduunka (18% Mareykanka) waxaanna dhibaato dhab ah ku qabnaa gacmaheena. Tilmaamkeedii ugu dambeeyay ee 'Sprout Social Index', way xisaabiyeen